राजिनामा स्वीकृत गर्न स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीको निवेदन, मन्त्रालयद्धारा मन्त्रिपरिषदमा ‘फरवार्ड’ – Nepali Health
२०७६ मंसिर २२ गते १७:१४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २२ मंसिर । स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले आफ्नो राजिनामा स्वीकृत गर्न सरकारसमक्ष पुन निवेदन दिएकी छन् । पाँच दिन अघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर आफ्नो राजिनामा स्वीकृत गरिदिन पुर्न निवेदन दिएकी हुन् । सो निवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ ।
गत १३ कात्तिकबाट लागू हुने गरी डा चौधरीले महिनाको शुरुमै राजिनामा दिएपनि गत १७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो ।
‘उहाँले राजिनामा स्वीकृत गरियोस भनेर पुर्न निवेदन दिनु भएको थियो । हामीले निवेदन मन्त्रिपरिषदमा फरर्वाड गरिसकेका छौँ । स्वीकृत हुने नहुने त उतैको कुरा भयो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
सचिव डा चौधरीले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डव्लुएचओ)को कन्ट्रि अफिस भारतका लागि पी ५ लेभलमा नाम निकालीसकेकी छन् । यता राजिनामा स्वीकृत नहुँदा उता नियुक्ती लिन अफ्टेरो पर्ने देखिन्छ । ‘त्यसैले पनि उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय त राजिनामा स्वीकृत गर्न पोजेटिभ रोल नै खेलेको छ । उहाँलाई दुख नदिउ भन्नेमै छ,’ एक उच्च अधिकारीले भने ।
पछिल्लो समय डा. चौधरीले सरकारविरुद्ध दायर रिट त फिर्ता लिइन र राजिनामा दिइन । तर सिंहदरबारले उनको राजिनामा सजिलै स्वीकृत गरेन ।